China 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 kuHDMI Type-C SD/TF Docking chiteshi cheSurface Pro 7 vagadziri uye vatengesi |Wellink
7in 1 USB3.0 Rudzi-C3.0 kuHDMI Type-C SD/TF Docking chiteshi cheSurface Pro 7
Dhizaini yeSurface Pro 7 Cherechedzo 1: Iyi yekumusoro pro dock haikodzeri nzvimbo yako zvakanyanya kana iwe ukashandisa inodzivirira kesi pairi.Inoenderana neMicrosoft Surface 7.* Note2: Haienderani neSurface Go/ Surface Pro 3,4, 5, 6.
High kumhanya Ethernet kubatana
1000Mbps Ethernet chiteshi chepamusoro-kumhanya internet kusevha kumhanya, kushandiswa kwepasirese kunoshanda kune dzakasiyana nzvimbo.
4K HDMI Adapter:Ratidza pachena Laptop yako yakakwirira-resolution 4K UHD@ 30Hz kana yakazara HD 1080P vhidhiyo kuHDTV, tarisisa kana purojekita kuburikidza neHDMI chiteshi, kutsigira kumashure 2K / 1080p / 720p / 480p / 360p zvisarudzo.
Mirror Ratidza Mode&Inowedzera Kuratidza Modhi.
Inotambanudza chidzitiro chako nechiteshi cheHDMI uye yakananga 4K @60Hz vhidhiyo kuHDTV, mamonitor, kana mapurojekita.High-resolution 4K @60Hz HDMI MacBook Pro Donlge Adapter inokuunzira yakajeka mashandiro evhidhiyo kuwiriranisa.Yakakwana yekufambisa yakazara HD bhaisikopo pane yako HDTV;Wedzera mutambo wevhidhiyo we3D pane vatariri vako kana kuratidza PPT yako kuburikidza nemapurojekita emisangano yehofisi uye varaidzo, iyo inokupa iwe yakajeka yekuona chiitiko sekunge wanga uri panzvimbo.
SD Kadhi Slots (USB 3.0 kumhanya)
• SD Slot: Inotsigira SD, SDXC, SDHC, RS- MMC.
2 x USB 3.0 zviteshi
• Maximum Data Transfer Rate 5 Gbps.Chinja bhaisikopo mumasekonzi.
• Kupa mukana usina musono ku USB 3.0 wired keyboard, mouse, USB flash drive,smart phone, tablet, zvichingodaro. backward inoenderana neUSB 2.0/1.0 zvishandiso.
Yakagadzirwa neyakagadzika aluminium-alloy, yakakosha shamwari yeese type- c port laptop.
Kana ichienzaniswa nemaadapter epurasitiki, uchishandisa aluminum alloy shell, Gllitra USB-C Hub inogadzira yakashongedzwa uye yakachengeteka, yakasimba, inoshanda, uye yakanaka USB C adapta.Aluminium shell inopawo kukurumidza kupisa kupisa kudzivirira zvishandiso zvako.
Kuvimbika Dziviriro & Kudzora Tembiricha
Basa rega rega rakagadzirirwa chip rakasiyana, rinoshanda zvakanaka.Yakagadzirirwa kudzivirira kupisa, ichiita kuti ive yakachengeteka uye yakavimbika kana akawanda madoko akagarwa.
Mubvunzo:Unogona kushandisa akawanda madoko panguva imwe chete?Kana kuti imwe chete panguva?
Mhinduro:Ini handishandise ese madoko kamwechete nekuti ini handina izvo zvakanyanya kudiwa.Ini ndinoshandisa anosvika zviteshi zvishanu panguva imwe.Iyo USB C HUB inoshanda zvikuru.Kunopisa zvishoma asi zvakajairika.
Mubvunzo:Ko plugging / unplugging iyi adapta zuva nezuva inotanga kukanganisa yayo kana Mac's port kugadzikana kana kusimba nekufamba kwenguva?Kukuvadza kunozoitika here?
Mhinduro:Ndine hanya semi.
Ndine iyi USB C Hub uye ndakatoishandisa kanopfuura kanoverengeka.Kusvika pari zvino haisati yaunza chero dambudziko.Kwete kutaura kuti hazvichaita mune ramangwana zvakadaro.
Mubvunzo:Chikwata ichi chinopisa here?Ndine imwe yakafanana yekuti mushure memaminitsi mashanu inopisa zvakanyanya uye zvese zvakabatanidzwa nayo zvinobva zvapisawo.
Mhinduro:Zvishoma, Asi ini ndinofunga inguva yakajairwa kuti HUB adapta inodziya panguva yekushanda (asi isiri kupisa).Nekuti iyo HUB adapta inoda rimwe simba kuti ishande.
Mubvunzo:Patafura yakatsetseka kana yakafuratira, majoini akanyatsoenderana sei nemadoko?Ndinoda kukwanisa kutsveta unit mukati pasina kusimudza.
Mhinduro:Hongu, ndinogona kuipinza nyore nyore neruoko rumwe chete uye ndongoipinza mukati. Hapachave nekujairira, saka unofanirwa kusimudza komputa woipinza.
Mubvunzo:Iyi macbook pro usb c hub inochaja chete neThunderbolt port kana unogona kushandisa imwe usb-c?
Mhinduro:Inobhadharisa chete neThunderbolt port, imwe usb-c ndeye data chete.
Mubvunzo:Ko usb 3.0 ports pahabhu ino inofambirana neanker usb kuenda kune mheni tambo yekuchaja iphone here?
Mhinduro:Tine urombo, asi iyo USB 3.0 ports iri pahubhu inongotsigira kuendesa data.Ivo havatsigire kuchaja kana media kuratidza.
Mubvunzo:Iwe unofanirwa kuve neadapta yemagetsi yakavharirwa mukati kuti ushandise dock?
Mhinduro:Kwete, iwe unogona zvakare kushandisa iyo USB C hub pasina kubatanidza iyo magetsi adapta kwairi.Iwe unogona kupa kunze simba rehubhu kuburikidza ne USB C chiteshi kana iwe uchibatanidza magetsi-ane nzara maturusi kwairi.
Mubvunzo:Inogona kumhanyisa mamonitor maviri kubva pane iyi adpator kune yakawedzera (isina kufanana) skrini?
Mhinduro:Ehe, ndakaedza kubatanidza mamonitor maviri panguva imwe chete, iyi HUB adapta yaigona kushandisa mamonitor maviri.Unogona kubaya chiratidziro chimwe muchiteshi cheHDMI, uye chimwe chiri muThunderbolt 3 mhando C chiteshi.
Iwo maviri mamonitor anogona kuratidza akasiyana mufananidzo.
Zvakapfuura: 7in 1 USB3.0 Rudzi-C3.0 kuHDMI USB3.0 Rudzi-C SD/TF Docking chiteshi cheSurface Pro 7
Zvinotevera: 65w gallium nitride adapta 12 mu1 Type-C dock(2 mu1)